Burmese taste - Iora: Almost Burmese traditional meal
တုို့ စရာ၊ ပန်းပွင့်နဲ့ ကြက်ဥကြော်၊ ကင်မွန်းရွက်ချဉ်ရည်၊ ငါးအုိုးကပ်
ကိုင်း...ဒီတခါတော့ တုို့ စရာထဲကဇူခိနိကလွဲရင် အားလုံး Authentic Burmese food လုို့ ပြောလို့ ရသလောက်ပါဘဲရှင်။ အင်း..ဒါပေမဲ့ ငါးပိရည်ကလည်းထုိုင်းကလာတာဆုိုတော့ မြန်မာစစ်စစ်တော့ မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။
Watercress ရေမုန်ညင်း ( ဇရစ်ရုိုး သို့ မဟုတ် ကန်ဇွန်းရွက် အစားထိုး) နဲ့ ကင်ပွန်းရွက်ချဉ်ရည်
ကျမတုို့ အမေက ကင်ပွန်းရွက်ချဉ်ရည်ချက်ရင် အချဉ်လည်းပြေ၊ ၀ါးစရာအဖတ်လည်းပါအောင် ဇရစ်တုို့ ကန်ဇွန်းတို့ ထဲ့ချက်တတ်ပါတယ်။ ပတတ်စာပေါ်ချိန်ဆုိုရင်တော့ ပတတ်စာလေးနဲ့ ပေါ့။ ပတတ်စာနဲ့ ကတော့ကျမအကြိုက်ဆုံးပါ။
ငရုတ်သီးမှုန့် ၊ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီဆီသတ်။ ခရမ်းချဉ်သီးထဲ့၊ ငံပြာရည်ထဲ့၊ ကျမက ခရမ်းချဉ်သီးသိပ်မကြေဘဲအိုးကပ်လုပ်ချင်လို့ သိပ်မကြေသွားခင်မှာ ငါးထဲ့ပါတယ်။ အိုးကပ်လုပ်မှာမို့ ရေဆူလည်း သိပ်အများကြီးမထဲ့ပါဘူး။ ငါးက အမြီးကလွဲရင် အသားတွေချည့်လွှာထားတာမို့ ရေအများကြီးမလိုပါဘူး။ ငါးထဲ့ပြီး အဖုံးအုပ်ထား၊ ခဏနေတော့မှရေဆူလေးအလောတော်ထဲ့။ အုိုးလေးနဲနဲလှုပ် လှုပ်ပေးပြီး ဆီပြန်တဲ့ထိတည်ပြီး တော့ ကပ်အောင်ထားလိုက်တာပါဘဲ။
ငါးပိရည် နဲ့ တုို့ စရာ။ စားခါနီးမှ ငရုတ်သီးအလှော်မှုန့် ကြွတ်ကြွတ်လေးထဲ့
ဒညင်းသီးပြုတ်၊ နံနံပင်၊ မုန်ညင်းဖူးပြုတ်၊ ဇူကိနိပြုတ်၊ သံပုရာသီးစိတ်
စတီးဇလုံနဲ့ ဖျော်ထားတာ ငါးပိရည်ကို
ငါးပိရည်ဖျော်ရင် အများအားဖြင့် ငရုတ်သီးစိမ်း နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးကိုမီးအုံးဒါမှမဟုတ် ငါးပိရည်ထဲထဲ့ပြုတ်ပြီးဖျော်တာပိုသဘောကျလို့ အဲလိုဖျော်ထားတာပါ။
ဒီလုိုခပ်ကပ်ကပ်လေးဖြစ်လာပြီး အနံ့ လေးမွှေးလာရင်တော့ သုံးဆောင်လို့ ရပါပြီရှင်
Posted by Iora at 1:50 AM
Labels: Fish, Side dish, Soup, spicy paste, Veggie
rose January 26, 2012 at 3:35 AM
ငါးဟင်း၊ ငပိရည်နဲ့ တို့စရာ ဒညင်းသီး၊ မုန်ညှင်းစိမ်းတို့နဲ့ အ၀စားသွားတယ်နော် မမအိုင်အိုရာ...။
ကောင်းမွန်ဝင်း January 26, 2012 at 3:38 AM
ရန်ကုန်မှာစားခဲ့တဲ့ ငါးပိရည်ဖျော်ထဲကို ကြက်သွန်နီဥ သေးသေးမီးဖုတ်ထည့်တာကြိုက်တယ်။
အိုင်အိုရာရယ် ဟင်းတွေကပြောစရာမရှိအောင်ကောင်းတယ်။ ကျွန်မကတော့ ငါးပိရည်အဲလိုအဖျော်နဲ့ တို့စရာပန်းကန်ကြီးနဲ့တောင် ထမင်းတစ်ပန်းကန်အရင်ကုန်မယ်....သိလား။
Candy January 26, 2012 at 7:47 AM
စားချင်စရာတွေကြီးပဲ.. ငါးဟင်းဆိုသိပ်ကြိုက်တာ.. စမ်းချက်ကြည့်ရင်ကောင်းမလား :D :D
Nyi Linn Thit January 26, 2012 at 1:41 PM
မအိုင်အိုရာရေ... ဗိုက်ဆာတယ်ဗျို့..၊း)
ငါးပိရည်၊ ဒညင်းသီးပြုတ်၊ ငါးဟင်းက အနှစ်လေးနဲ့တင် သုံးပန်းကန်လောက်တော့ အသာလေးပဲ...။းD
မီးမီးငယ် January 26, 2012 at 4:08 PM
ဒညင်းသီးကကျောက်ကပ်မကောင်းတော့ဆရာဝန်ကမစားနဲ့ ဆိုလို့ ပါ။
Mon Petit Avatar January 26, 2012 at 7:42 PM
I am hungry sis, all the dishes look yummy!
Iora January 26, 2012 at 11:42 PM
စားသွား..စားသွား အ၀စားသွားပါရုို့ စ်ရေ။ ၀တ္ထုလေးလာဖတ်သွားတယ်နော်။း))
ဇူခိနိကုိုပြုတ်စားဘုို့ ကုိုယ်လည်းမေ့မေ့နေတာ။ ဘာမှမရှိမှလက်ထဲမှာရှိနေရင်လုပ်စားဖြစ်တော့တာ။
ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် ကြက်သွန်နီလေးမီးအုံးပြီးထောင်းထဲ့လည်းကောင်းတယ်။ ကုိုယ်လည်းကြိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ကိုယ်က နောက်နေ့ ကျန်နေရင် အနံ့ များပြောင်းသွားမလားဆုိုပြီး (ပျင်းလည်းပျင်းတာနဲ့ )ထဲ့တော့ဘူး။
ကြိုက်ရင်စမ်းချက်ကြည့်လေ။ သိပ်မကြာပါဘူး။ (ငါးမကုိုင်ရရင်လေ)း)
အေးဗျာ..အိမ်ချင်းနီးကြရင်ကောင်းမှာ။ ကျမကအဲလိုတွေ ငါးပိရည်တွေတို့ စရာတွေနဲ့ ဆုို သူငယ်ချင်းတွေ မောင်နှမတွေနဲ့ သိပ်စားချင်တာ။ မြန်မာပြည်မှာဆုို တုို့ စရာကုို ဘန်းနဲ့ ပြင်ရတာ အမယ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ လေ။
အော်..ကျောက်ကပ်သိပ်မကောင်းရင်တော့ရှောင်နော်။ အစားတလုတ်နဲ့ ဒုက္ခရောက်ရတာတော့မတန်ဘူးသိလား။
ကိုယ်လည်း တုို့ စရာတွေအများကြီးချပေးတဲ့ထမင်းဆုိုင်ဆုို သိပ်သဘောကျတာ။ တခါတခါထမင်းတောင်မထဲ့ရသေးဘူး တုို့ စရာနဲ့ ငါးပိရည်ချည့်စားနေတာနဲ့ တော်တော်ပြည့်နေပြီ။
အဲဒီကင်မွန်းရွက်က သူငယ်ချင်းက ရန်ကုန်က အခြောက်ခံပြီးမှာထားတာကို လက်ဆောင်ပေးထားလို့ စားရတာ။ နုို့ မို့ ရင် ဒီမှာတခါမှမတွေ့ ဘူးရယ်။
ဘုရားရှစ်ခုိုးတုိုင်း ဘလော့ဂါသူငယ်ချင်းမောင်နှမတွေ စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးတယ်။
I like all your dishes and want to be your neighbour.I was busy and luckily i come to you with morning coffee mug.Though i'm late, it's still there and i eat all. Haveanice day!
မြတ်ကြည် January 27, 2012 at 2:08 AM
Iora January 27, 2012 at 6:33 PM
I am so glad that you like my dishes and want to be my neighbour. But I am afraid that you are moving away soon after you have been my neighbour because of smell of cooking. (Hnyaw de so pi ma pyay gyay naw).
Haveanice day too. Thanks.
barbielay January 28, 2012 at 4:58 AM
ငပိရည်မစားရတာ၃နှစ်လောက်ရှိရောပေါ့  :)
san htun January 28, 2012 at 9:29 PM
Iora January 28, 2012 at 11:47 PM
ထုိုင်းကလာတဲ့ပုလင်းတွေ ၀ယ်လုို့ မရဘူးလားအဲမှာ။
ကုိုယ်လည်း ကျိူရေးခက်လို့ အမြဲမစားနုိုင်ပါဘူး။း(
အားနာတာနော်။ စန်းထွန်းစီမှာ အဆောင်မှာစားရတာဆုိုတော့လုပ်စားဘုို့ လည်းမလွယ်နဲ့ ။
mstint January 29, 2012 at 11:56 PM
မဒမ်ကိုး January 30, 2012 at 1:52 AM
၀ိတ်ချပါ့မယ်ဆိုမှ အောင်မလေး ဗိုက်ဆာလိုက်တာနော်း(
ဘိုဖြူ January 31, 2012 at 4:25 AM
ငါးပိရည် နဲ့ တုို့ စရာ ဆိုရင်တော့ အားမနာတော့ပါဘူးဗျာ
တကယ်တော့တို့ စရာတွေလုပ်ရတာတခါတခါသိပ်ပျင်းတယ်။ အင်း..ဟင်းလည်းတခါတခါလုံးဝမချက်ချင်ဘူး။း)
၀ိတ်ချချင်ရင် တို့ စရာနဲ့ ဟင်းတွေများများစားသွားနော်။း)
အားမနာနဲ့စား စား...း)
Chaw Su April 14, 2012 at 10:12 AM
အိုင်အိုရာရေ- အိပ်ခါနီးရောက်လာပြီး စားချင်စရာကောင်းတာတွေတွေ.သွားလို. ဗိုက်ပြန်ဆာပြီး မအိပ်နိူင်တော့ပါ...း)
Iora April 22, 2012 at 8:28 PM
Iora April 22, 2012 at 8:30 PM